Kaung Su San Dental Clinic | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Kaung Su San Dental Clinic | Ahlon
Kaung Su San Dental Clinic
ကောင်းဆုစံ သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းကို ကို အမှတ် ၆ ၊သစ်တောလမ်း ၊ အလုံမြို့ နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့့ တွင် 2017 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခု ဆေးခန်းတွင် သွားနှုတ်ခြင်း ၊သွားအာရုံကြောကုသခြင်း၊ ရောင်ခြည်ဖြင့်သွားဖာခြင်း ၊သွားအသေစိုက်ခြင်း ၊သွားအရှင် အံကပ်စိုက်ခြင်း ၊သွားဖုံးရောင်ရောဂါကုသခြင်း နှင့် သွားသန့်ရှင်းရေးပြု လုပ်ခြင်း ၊မညီညာသောသွားများအား သွားညှိကုသခြင်း၊ သွားစိန်ကပ်ခြင်း နှင့် ကလေးသွားရောဂါကုသခြင်းများကို ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများဖြင့် ဆရာဝန်ကြီးများမှ စိတ်ရှည်သဘောကောင်းစွာ ကုသဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ နံနက် (၉)နာရီမှ ည (၈)နာရီအထိပိတ်ရက်မရှိဖွင်.လှစ်ထားပါသည်။
09:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No 6, Thit Taw Street, Ahlon Township, Yangon
အနီးအနား သစ်တောမှတ်တိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Kaung Su San Dental Clinic is located at No 6, Thit Taw Street, Ahlon Township, Yangon since 2017 January. The Clinic can provide numerous dental services and treatments like tooth extraction, RCT, Light Cure, Crown & Bridge, Denture, Scaling & Polishing, Ortho Treatment, invisalign, Skyce Diamond and dental care for children. Open 9:00 AM to 8:00 PM for all days.The doctors are very friendly and kind, thus we recommend you visit this clinic for your tooth health.
The Gym City ( Ahlon )
Elegant Boutique Bridal Shop & Studio
Unique Gym & Health Club (4)
L LAY Hair Design